Ule na nkatọ gvSIG 1.9 - Geofumadas
Ule na ịkatọ gvSIG 1.9
Disemba, 2008 GvSIG, innovations
Na nso nso a mara ọkwa 1.9 version nke gvSIG na mkpụrụ nke alpha, mgbe a nwalere m kpebiri ịhapụ ihe ụfọdụ tupu echefu ha:
Es ike ibudata ma nsụgharị nwere ihe dị mkpa, nke na-atụle 103 MB maka Windows na 116 MB maka Linux. Nke a bụ ezigbo ihe ọzọ ma ọ bụrụ na ịnweghị ntinye 1.3, ọ bụrụ na ịnwee nrụnye ọrụ ị nwere ike ibudata nsụgharị ahụ na-enweghị ihe ga-eme tupu ị gaa 80MB.
Ụdị 1.9 nke koodu ahụ dịkwa.
Achọtara m mbipute ahụ na-enweghị mkpa ọ bụla ma ọ bụrịrị m na nkwụnye ahụ kwadoro m na ozi ahụ:
java.io.FileNotFoundException: C: Akwụkwọ na ntọala ...
O doro anya na nke a mere n'ihi na a ga-ekenye Java ihe ụfọdụ, ndị a nwere ike ịbụ na ikike maka mbinye aka nke kaadị ọnwụ, ka m wee ghara ime ka m dịkwuo mma ma ewepụbeghị m ya nsụgharị ndị dị ugbu a. Mgbe ahụ, mgbe m na-eme nwụnye ọzọ, ana m arịọ gị ka ịlele ma enwere ihe ọ bụla achọrọ na nke ahụ na-etinye ụdị ziri ezi nke Java ... mgbe ahụ ihe niile gara nke ọma.
Mgbe ị wụnye ya, anaghị m mepụta akara ngosi na desktọọpụ, ma ọ bụ na mmalite menu (ọ bụ ezie na m chere na ị jụrụ m ma ọ bụrụ na achọrọ m, m wee sị ee), ya mere aghaghị m ịmepụta ụzọ mkpirisi ebe ọ na-arụ ọrụ.
C: Mmemme FilesgvSIG_1.9_alphabingvsig.exe
Maka nke a, "edepụtaghachi" na faịlị ahụ, wee pịa "mkpirisi mkpirisi"
Mgbe m mepere ọrụ dị adị, enwere m ozi na-ekwulu mmụọ, o doro anya n'ihi ụdị ntule ahụ ... mana echeghị m na ọ bụ njehie na-adịgide adịgide.
Njehie ọrụ nyocha: + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = -3.0 + k = 0.9996 + x_0 = 500000.0 + y_0 = 0.0 + ellps = intl + nkeji = m ka + proj = tmerc + lat_0 = 0.0 + lon_0 = - 87.0 + k = 0.9996 + x_0 = 500000.0 + y_0 = 0.0 + ellps = WGS84 + datum = WGS84 + nkeji = m:
O yikwara m na ugbu a ọ na-erikwu akụ, usoro a na-ada ntakịrị, na nke a, ha ekwupụtala na a ga-enwe mmezi na usoro ụlọ… ha ga-echeworị na ya.
Anyị nwere ike iche na mbipụta a ga-enye onwe ya ọtụtụ ihe, ebe ọ bụ na arụ ọrụ dị ntakịrị ntakịrị na ọ na-eto ntozu okè.
Aghọtara na nke a bụ ụdị nnwale, na n'oge na-adịghị anya anyị ga-enwe ụdị nkwụsi ike gvSIG 2, site na mgbe ahụ a ga-edozi obi abụọ ndị na-abịa na ndepụta nzipu ozi ... na-agafe, ụfọdụ ihe efu dị mfe dịka agwa a etinyekarị ebe ahụ.
N'etiti njirimara kachasị mma, nke m kwuru banyere ya n'elu, bụ ntinye otu sextant. Enwere ọtụtụ n'ime ebe a, site na raster ka vector data akakabarede na hydrologic analysis.
Ma ọzọ na nke a bụkwa:
-Ntinye nke TIN iji mepụta mesiri triangulation ... Echere m na ị nwere ike ịrụ ọrụ contours (... nyocha 3D)
Ngwaọrụ maka nyocha netwọọ (… nyocha nke ọrụ)
Ngwaọrụ iji gbanwee tọghatara na vector (… arc scan)
Nsonye nke topology
... n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ, nke anyị ga-enwe oge iji kpaa
Ọdịdị ... ọtụtụ ime
Ọ bụ ọganihu dị mma ha mere, mana m chere na ụzọ iconography ga-adị mma maka ndị na-ese ihe eserese n'ihi na anyị ga-echetarịrị na ha bụ "akara ngosi" yabụ otu a kwesiri ịkwalite ihe, na-ejigide ịdị ọcha na njikwa ụlọ ọrụ.
Iji mepụta akara ngosi chọrọ njirisi gafere ịme eserese siri ike na Corel Draw wee jiri Gimp mee ka ha gbanwee ihe ngosi 64 × 64. Ojiji nke onyinyo, isi ihe na gradients kwesịrị ịjụ ajụjụ na bọtịnụ ndị na-ekwesịghị ịpị pịa, ime ka ihe dịkwuo mfe na itinye oge na akara ngosi maka akara ngosi "na oke" nwere ike ịbụ nzọ dị mma.
M na-ekwusi ike, ọ bụghị na onye mmebe ahụ na-ele anya dị ukwuu na ọrụ dị ukwuu nke nkà gbanwere n'ihe osise, anyị ga-amata na nke nta, anyị enweela ikike arụmọrụ ka mma ebe ọ bụ na ndị na-eme ihe mgbe ochie kere 8x mbugharị agba ahịhịa ma ọ bụ na anyị agaghị emejọ na ịgbagọ echiche mbụ. nke "akara ngosi"
Ọ bụ ụgbọ elu, mba, nnụnụ, ọ bụghị; bu ... akara iwu
... j *, dị ka enweghị m ike iche n'echiche ... ọ bụrụ na ọ dị ... ọ dị ka ... ọ dị ka
Mpempe akwụkwọ, ọkpọ agha ... ada ada, bụ akụkọ ihe mere eme
kedu ihe mere ... ha anaghị ahụ ihe akara microfilming dị ka ọ dị na cryptograph.
Na mkpokọta, akara ngosi ahụ dị ka ọchịchịrị gbara ọchịchịrị, yana akara nwere akara siri ike na enweghị otu, lee spline n'ihe metụtara ihe ndị ọzọ e kere eke. Enweghi echiche banyere otu ha ga-esi ele anya mgbe ha na-eji ihuenyo nwere mkpebi dị elu ma yabụ ntakịrị.
E nwere oge ụfọdụ ọ dị mma ka ọ dị ka yie mgbakọ ndị a nabatara, dị ka "undo" na "redo" karịa ime akụ akụ ndị a ... * xtrax, yana oke oroma oroma ...
Dika mmepe komputa, nke eji tinye ihe ndi mmadu n’ime ihe omuma, iconography aghaghi iburu n’obi onye… ma ọ bụ ije
Ma, hey, ọ bụ ihe ọma niile nke nsụgharị a kwere.
Previous Post«Previous Nwepụta AutoCAD Civil 3D maka mmepe
Next Post Na isiokwu nke asusuNext »
7 Azaghachi na "Ule na nkatọ gvSIG 1.9"
Amaghị m, enweghị m ubuntu, mana m chere na ọ na-ezo aka na ihe anyị na-eme na windo mgbe ị na-emepụta usoro omenala maka windo.
kedu ka m ga - esi kwụsị ọrụ ọhụụ ????
noriberto kwuru, sị:
Gostaria mara otú e si ejikọta duas linhas ọ bụla gvsig (ọ dịghị iwu AutoCAD dị kpọmkwem).
Enwere m otu nsogbu ahụ dị ka Luis na mgbe ọ kwụsịrị ọrụ niile ọ na-arụ.
Luis Puente kwuru, sị:
Ejiri m ụdị 1.1.2 (site na 1.1 gaa n'ihu) nakwa 1.9 na Ubuntu 9.1 Karmic na ihe ndị a na-eme:
1 Onye na-ebuputa ọrụ anaghị arụ ọrụ na desktọpụ ma ọ bụ mepụta ya.
2. Window adịghị abawanye ka e wee ghara igosipụta windo Project Manager.
3. Enwere windo ndị na-egosi wijetị na ihe ọ bụla nke ọdịnaya.
Kedu ihe ọ ga - abụ na olee otu esi edozi ya?
PS M na-eji MGBE na-ese foto.
Daalụ maka ịkwụsị ma na-atachi obi ụbọchị dị egwu… ọ naghị atọ gị ụtọ.
Anyị ga-achọ ngbanwe maka usoro ahụ nakwa na ngwa ngwa o kwere mee, anyị ga-akwalite ya n'ihi na ọ ga-aghọ ngwá ọrụ bara uru dịka a na-ekesa ya.
: p nwute maka okwu mkparị.
Anyị na-edeba ihe niile ị kwuru ma na-atụ anya ka mma na akụkụ ndị a. N'ezie ọ bụ otu n'ime akụkụ nke ọrụ ahụ echefughị, n'ihi nke ahụ, e mebere òtù na-arụ ọrụ, n'ime ọrụ ahụ, iji nyochaa njirimara na ụdị nke ngwa ahụ.
Ụfọdụ ihe ị kwupụtara nwere ihe mere ha ji bụrụ, dịka ọmụmaatụ akara ngosi akara ngosi bụ ihe ziri ezi, n'eziokwu ọ bụ onye na-eji gnome / ubuntu ịmepụta ihe. Ihe ndị ọzọ, dị ka enweghị njikọ nke akara ngosi, bụ iji mix ndị ọhụrụ na ndị agadi - nke anyị ga-edozi maka ọdịnihu, yana wdg.
Daalụ maka ịchọọ mkpụrụ ọhụrụ ọhụrụ na ịza ajụjụ banyere mmetụta gị!